galmudugnews.com » Daawo Video Dagaalkii Garxajis Muuse Biixi oo leh“Anigoo wax dili kara duco qaadan maayo” Home Contact US
Home » WARARKA, XULKA Galmudugnews » Daawo Video Dagaalkii Garxajis Muuse Biixi oo leh“Anigoo wax dili kara duco qaadan maayo” Daawo Video Dagaalkii Garxajis Muuse Biixi oo leh“Anigoo wax dili kara duco qaadan maayo” admin on
May 23rd, 2013 //
No Comment Views 168109
Popular post by viewFanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy looga duubay Jig jiga . - 139736 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 31901 hitsContact US - 30635 hitsDaawo haweeney Muqdisho ka furatay Guri lagu tunto - Fadeexo - 26197 hitsDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 25658 hitsTopnews:-Wiil uu dhalay Ganacsade Xaaf oo falkii ugu xumaa ku sameeyay Gabar Maskiina +Sawiro? - 25314 hitsThis report no more in Galmudugnews - 23911 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 23089 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 22468 hitsHalkaan ka Daawo Video Xasan Dahir Aweys oo la dejiyay guri burcad badeeda ka dhisteen Cadaado iyo Ciidamada ilaaladiisa - 22386 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 21495 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 21161 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 21156 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 20862 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 19895 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 19895 hitsReal Madrid oo wiilka baabuuniska laga badshey ee Gareth Bale looga diiday 40.milan Euro. - 19298 hitsVOA-Idaajaa iyo Qabyaaladeynta Suugaanta - 18533 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 17839 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 17789 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 17700 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 16913 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 16863 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 15552 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 15506 hits Home Contact US